वैंज्ञानिकले पत्ता लगाए शा’रि’रीक स’म्पर्क गर्ने उत्तम समय ! – Sandesh Press
काठमाडौं । स८:म्पर्क कुन समयमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? यो सामान्य प्रश्न हो यसको उत्तर पनि मानिसहरुले अत्ति सरल रुपमा दिन्छन । जब चाहाना हुन्छ तब दुबैजनाको सहमतिमा सम्बन्ध राख्नुपर्दछ । यो कुरा पनि ठिक छ तर बिहान सम्बन्ध राख्नाले स्वास्थमा निकै नै फाइदा पुग्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
हेल्थ एन्ड फिटनेस कम्पनी फोर्जा सप्लीमेन्टको एक अध्ययनले विहानको समयमा सम्बन्ध राख्नाले तनाव कम हुने र दिनको सुरुवात पनि राम्रो हुने देखाएको छ । बिशेषगरी बिहान साढे सात बजेको समय बेष्ट हुँने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागि मानिसहरुले बिहानको समय सम्बन्ध राख्नाले पुरै दिन मुड फ्रेश रहने बताए ।
यसको एक लो”जिकल कारण भनेको बिहानको समयमा पुरुषको टे:स्टो:स्टेरोन लेभेल निकै उच्च रहन्छ । जसले गर्दा उक्त समय सम्बन्ध राख्दा निकै जोशिलो र धेरै समय टिक्ने हुन्छ ।
बाँकेकी संगीता सुनारको घ,टना निकै अनौठो छ । उनका श्रीमान सम्पर्कमा छैनन् । श्रीमानको नाम सुनिलकुमार सुनार हो । उनको विवाह भएको ६ वर्ष पुगीसकेको छ ।
तर उनको विवाह अ,नौठो तरिकाले भएको हो । संगीताको विवाह वैशाखमा अर्कै केटासंग हुने फिक्स भइसकेको थियो । सुनिलकुमार संगीताको घरमा आइरहन्थे । संगीताले सुनिललाई पुसाईँ भन्थिन्, ।
अब मेरो अर्कैसंग विवाह हुन लागेको छ मेरो पछि नलाग भनेर उनले सुनिललाई सम्झाइन् । मलाई मेरो जिवन खुसीसाथ विताउन दे भनेर भनेर मैले बारम्बार आग्रह गर्थेँ, संगीताले त्यो दिनको घ,टना सुनाउँदै भनिन्, त्यो दिन सुनिल मेरो कोठामा आयो । सुरुमै मेरो भिडियो खिच्यो । अनि मेरो सिउँदोमा सिन्दुर हालिदियो । मैले त्यती बेला पुसाई तपाईले किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ ? भनेर सोधें ।
Prevयो राशिबाट साढे सात वर्षपछि सकिँदैछ शनिको दशा, मिल्नेछ अपार सुख-सफलता !
Nextवैंज्ञानिकले पत्ता लगाए शा’रि’रीक स’म्पर्क गर्ने उत्तम समय !
निषेधाज्ञाको बेला विदेशबाट यो बाट हुँदै नेपाल आउँन सकिने